पचास लाख भारतीयको नागरिकता खोसे प्रवासी नेपालीलाईपनि चाहिन्न
अक्टोबर १७, २०११
● एकराज भूसाल /अष्ट्रेलिया देशको भौगोलिक र राष्ट्रिय अखण्डताको संवेदनशिलताले गर्दा गैह्र आवाशिय नेपालीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिन सकिन्न भनेर अर्थमन्त्री पूनले वर्तमान सरकार र माओवादी पार्टीको नीति प्रस्ट्याए । अब स्पष्ठ भयो, न त यो सरकारबाट नेपालीको...
दोहोरो नागरिकता माग्नेलाई ठिक जवाफ दिए अर्थमन्त्रीले
अक्टोबर १४, २०११
यस पटक गज्जब जवाफ दिए अर्थमन्त्रीले गैह्र आवाशिय नेपालीहरुलाई । यस अघिका सरकारका पदवालाहरु लुते देखिएका थिए । गैह्र आवाशिय नेपाली संघले माग्दै आएको दोहोरो नागरिकता दिन मन कुनै दललाई थिएन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी कसैलाईपनि...
घोषणा भइसकेको उमेदवारी रातरात कसरि उल्टियो ?
सेप्टेम्बर १८, २०११
कुनैपनि निर्वाचनमा उमेदवारले आफ्नो उमेदवारी दिन्छन् । त्यसमा रित पुग्नुपर्छ । सहमतीमै भए त निर्वाचनपनि हुनु पर्दैन नै । गल्ति कमजोरी भएपनि सहमतीमा मिलाउन सकिन्छ । तर ‘उमेदवारी बदर भयो’ भन्दै मेडियामा प्रचारनै गरिसकेर पनि रातारात फिर्ता...
बाठो बाँदरको कथा र बेल्जियममा प्रलयको रामकहानी !
जुलाइ ११, २०११
सुन्दा अलि बेमोज लाग्न सक्छ । नेपालीमा एउटा कथा छ, बाठो बाँदरको । बाँदर बाठो भयो भने फुल्लौरा चेप्टिएर मर्छ भन्ने । कथाले भन्छ, बाँदर रुखका पात पात हाम्फाल्छ । हाँगा हाँगा दौडिन्छ । फुर्लुङ्ग उफ्रिएको उ...
दूतावासको काम: भोज भतेरमै सिमित कि ब्यापारिक प्रवर्धन ?
जुलाइ २, २०११
● युवराज गुरुङ / बेल्जियम हामी सबैले राजनीतिक बिचार अलग अलग राख्छौं स्वभाविक हो । तर हामी तिन तिन जनाको साझा कुरा चाहिँ के हो त ? एनआरएनमा झन बढि राजनीति हुन्छ । सबै राजनीतिक मुद्दा त हो...
“राजनिति बुझ्नेले पो एन आर एन हाँक्न सक्छ”
जुन २५, २०११
जतिसुकै राजनिति गरिन्न भनेपनि नेपालीका धारोपानी र पाटी पौवा सम्म राजनितिक रुपमा बिभाजित छन्। राजनिति मन पर्दैन भनेपनि अहिले सबैभन्दा धेरै चासोनै राजनितिमा राख्छन् । देशका हरेक निकाय, अंग अंग राजनितिक रुपमा बिभाजित भएका बेला जहाँसुकै होउन्,...
चुनाव लड्न नसके’सि यस्तो आरोप लाउने?
मे २७, २०११
गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलमा सचिवका उम्मेदवारी विवादमा परेका छन् । जातीय संघ संस्थाको नाममा उम्मेदवारी बनाएपछि विवाद सिर्जना भएको बताइएको छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति, नेपाली लोकतान्त्रिक मन्च र जनप्रगतिशील मन्चले असहमति जनाएपछि सचिवका उम्मेदवार विवादमा परेका...
वेल्जियम एनआरएनको आगामी पाईलाहरु
अप्रिल १९, २०११
● युवराज गुरुङ / एन्टवेर्पेन, वेल्जियम वेल्जियम एनआरएनलाई दलीय राजनैतिक गतिविधि तथा हस्तक्षेपबाट मुक्त पारिनु पर्दछ भन्ने चर्को माग र दबाव बढि रहेको सन्दर्भमा यहाँ स्थित अस्तित्वमा रहेका चारै राजनैतिक दलका भातृ संस्थाले भटाभट् एनआरएन सरोकार समिति...
वेल्जियम एनआरएनले अधिवेशन पूर्व के गर्नु पर्ला ?
अप्रिल ५, २०११
● युवराज गुरुङ/ एन्टवेर्पेन, वेल्जियम संघ संगठनको सर्वोच्च निकाय अधिवेशन भएकोले वेल्जियम एनआरएनको अधिवेशन अघि कार्यसमितिले केहि अतिरिक्त कसरत गरेमा नतिजा अझ राम्रो निस्कन सक्दछ । आगामी कार्यकालको निति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिवेशन, अनि अधिवेशनले पारित...
वेल्जियम एनआरएन र आगामी अधिवेशन
फ्रेब्रवरी १४, २०११
● युवराज गुरुङ / एन्टर्पेन, वेल्जियम वेल्जियम एनआरएनले आगामी तेश्रो अधिवेशनको मिति तोकि सकेको छ । संस्थाले चाँडै निर्वाचन कार्यक्रम र आवस्यकीय उपसमितिहरू तोक्ने जानकारी सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ । प्रवाशमा रहने नेपालीहरुको साझा संगठन एनआरएनको घोषित यस...